Maninona ianao no tokony hampihatra ny paikadim-barotra amin'ny horonantsary amin'ny 2015 | Martech Zone
Maninona ianao no tokony hampihatra ny paikadim-barotra amin'ny horonantsary amin'ny 2015
Zoma, Martsa 20, 2015 Zoma, Martsa 20, 2015 Douglas Karr
Ny horonan-tsary izao dia manao azy ho amin'ny fifandraisana rehetra ataontsika an-tserasera. Nanomboka tamin'ny fanombohana ny fahana horonantsary mivantana tao amin'ny Twitter miaraka amin'i Meerkat, ny fitohizan'ny lazan'ny horonantsary amin'ny Facebook sy Instagram, ary ny fahazoana mampiasa ny famaritana avo lenta amin'ny finday rehetra. Raha ny marina, ny antsasaky ny fifamoivoizana horonantsary dia alefa amin'ny telefaona finday na tablette - fitomboana tsy mampino izany.
Ary tsy vitan'ny hoe malaza na entin'ny mpanjifa ny horonan-tsary. Mihoatra ny 80% ny ny mpitantana ambony dia mijery horonantsary misimisy kokoa noho ny nataon'izy ireo herintaona lasa izay ary ny telo ampahefatry ny Ireo mpitantana dia mijery horonan-tsary mifandraika amin'ny asa isan-kerinandro! Ary omena ny safidy, 59% ny mpitantana aleoko mijery horonantsary toy izay mamaky lahatsoratra. Na orinasa B2C na B2B ianao, dia manjary ilaina amin'ny paikadim-barotra nomerika anao ny horonan-tsary.
Ny fananana horonan-tsary dia mampiakatra ny tahan'ny misokatra, mampitombo ny tahan'ny click-through, ary mampihena ny tahan'ny unsubscribe amin'ny marketing amin'ny mailaka. Ny vidéo dia hitan'ny mpivarotra mahomby amin'ny fanentanana ny marika, ny fitarihana loholona ary ny firotsahana an-tserasera. Ny marketing amin'ny horonan-tsary dia nanjary malaza sy mandaitra ary efa notondroin'ny HighQ 2015 Ny Taona Marketing amin'ny Video!
Momba ny HighQ
HighQ manolotra sehatra fiaraha-miasa, famoahana, efitrano fandefasana ary vahaolana mazoto ho an'ny orinasa.
Tags: animé videohoronantsary mpanazavahoronantsary marketingsary mihetsika videovideo marketingfanatrarana horonan-tsaryWyzowl
Ny teny fikarohana karama lafo indrindra amin'ny Bing - ary ny fomba hisorohana azy ireo
Fa maninona ny olona no nijanona nanaraka ny marikao?
7 Nov 2014 amin'ny 11:38 maraina
Sary momba ny fampahalalana mahatalanjona ho an'ny fahatakarana ny fahombiazan'ny varotra horonantsary ary ny tsirairay ary ny zava-drehetra dia nofaritana tsara sy mora. Ka azoko antoka fa amin'ny fampandrenesana an'ity sary fampahalalana ity dia ho fantatry ny rehetra fa ny antony maha-zava-dehibe ny varotra horonantsary amin'ny orinasa ary ny antony mampitombo ny marketing video isan'andro. Misaotra an'i Douglas tamin'ny nanolotra sary fampahafantarana mahafinaritra toy izany ary manantena aho fa ho hita matetika ity sary fampahalalana manampy ity :)
Dec 18, 2014 amin'ny 9: 44 AM
Fomba mahatalanjona hizarana ny mombamomba anao amin'ny sary info.
Mar 22, 2015 ao amin'ny 4: PM PM
Mikasa ihany koa aho ny manomboka mitondra horonantsary ho an'ny mpamaky ahy. Very hevitra momba ny valiny aho, fa iza no mahalala. Mila manandrana aho! Ity infografika ity dia mandaitra tsara.